Sakafo fitsaboana nentim-paharazana | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Sakafo fitsaboana nentim-paharazana
Fantaro ny karazana digitalis mahazatra indrindra
Digitalis na ny latinina name digitalis (Digitalis), izay midika hoe rantsana. Ny anaran'ilay zavamaniry noraisina ho endriky ny corolla, mitovy amin'ny bikany, avy eo dia lasa ny anarana Rosiana - foxglove. Io harena io dia an'ny fianakaviana plantain. Amin'izao tontolo izao dia misy karazan-javamaniry 25 fantatry ny olona.
Ny toetra mahasoa ny mandarin sy ny fanoherana
Ny mandarin dia hazo maitso maitso maitso (hatramin'ny 4 metatra ambony) na kirihitra iray. Ny voankazo voankazo dia mahatratra enina santimetatra amin'ny manodidina. Ny endriky ny voankazo dia toy ny baolina lava etsy ambony sy ambany. Ny hoditry ny voankazo dia matevina, mihodikodina amin'ny lobolena. Ny voankazo dia misy tsaramaso 8-13, mamy ary mamy na main'ny mamy.
Sirôpiana Syriana: fampiharana, famonoana ary mampidi-doza
Tsy misy ifandraisany amin'i Syria ny Syroacan vatochnik, satria ilay mpikaroka no nanakorontana azy tamin'ny kutra, zavamaniry tany Moyen-Orient. Ity zavamaniry ity dia antsoina koa hoe ahi-maitso, ary dia maharitra. Ny mpitrandraka Syriac dia miditra ao amin'ny fianakavian'i Kutrov ary manana izao famaritana manaraka izao: Ny zavamaniry dia mitombo ho 2 m. Ny raviny dia malalaka, mitovy amin'ny atody ary miakatra hatramin'ny 25 cm ary 12 cm ny sakany.
Rahoviana aho no handray izany, inona no mahasoa sy ny fomba handraisana tsiranoka
Brier dia iray amin'ireo karazana karazana karazan-kazo any amin'ny fianakaviana Pink. Na dia izany aza, ny fiantsoana an'io zavamaniry io dia tsy tena marina, satria efa an-kolaka ny trano fonenana sy trano fonenana. Andeha isika hiresaka momba ny toetra mahasoa ao amin'ny rose, indrindra indrindra momba ny fampidirana ny ampahany.
Trano fandraisam-bahiny (fametrahana) ho an'ny ombivavy
Lohataona, fahavaratra, fahavaratra na ririnina? Rahoviana ianao no mametraka spinach any amin'ny faritra samihafa ao Rosia?
Azo atao ve ny mitondra karaoke ao Beijing ho volavolaina fa tsy mofo pita? Sakafo sakafo misy sary
Ny nuonda lehibe amin'ny akoholahy mpihinam-bary mitombo ho an'ny hena any an-trano: fananganana orinasa
Voninkazo Dieffenbachia: tombony sy fahasimbana amin'ny fahasalaman'ny olombelona
Mora maniry sy mahafinaritra amin'ny tsiro - vary varim-bazaha Rosiana voalohandohany
Famaritana sy fikarakarana plough "Morning"
Ny karazam-borona "Alpha" - tsaramaso, tsiro matevina, famaritana sy toetra
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Sakafo fitsaboana nentim-paharazana